Takelaka maizina: Fitaovana miasa amin'ny sary | Avy amin'ny Linux
Ao amin'ny Lisitr'ireo fampiharana sy fitaovana mahavariana ho an'ny Ubuntu / Linux izahay dia nanonona fitaovam-piasana miasa nomerika mahery antsoina hoe Darktable, nilaza fa nohavaozina tamin'ny volana desambra ny fitaovana ary feno fiasa vaovao maro, anisan'izany ny modely fanafoanana ny zavona, ny fanohanana ireo rafitra fiasa vaovao ary ny fampidirana ireo mombamomba ny fandaharana efa voafaritra.
Darktable dia fitaovana ahafahantsika manao a nanjary mora ny fandehanan'ny sary, satria manome antsika ny fahafaha tantano ny fizotran'ny fakana sary iray manontolo, manomboka amin'ny famolavolana ny sary ka hatramin'ny famoahana ao amin'ny lahatahiry voafantina.
1 Inona no atao hoe Darktable?
2 Endri-javatra maizina
3 Ahoana ny fametrahana Darktable?
Inona no atao hoe Darktable?
Darktable Izy io dia fampiharana workflow sary loharano misokatra, miaraka amin'ny interface tsara ary miaraka amina vondrom-piarahamonina somary lehibe, ny fitaovana dia manana fananana hazavana virtoaly sy fiasa izay mamela ny fivelarana sary amin'ny efitrano maizina voafehy.
Afaka mampiasa izany fitaovana izany isika tantano ao anaty tahiry ny data ratsy eto aminay, izay azo alaina sary an-tsaina amin'ny fiasan'ny hazavana virtoaly sy efitrano maizina, izany rehetra izany mba hahafahana manao miasa miaraka amin'ny sary matihanina hanatsarana ny tonony ary hiteraka sary iray misy fitantanana hazavana sahaza.
Darktable dia safidy tsara indrindra LightroomNy famolavolana sy ny fampiasa azy dia manampy amin'ny fandaminana sary sy fikirakirana rakitra fisaka misy valiny tena matihanina, toy izany koa, ny fanontana natao tamin'ny sary nomerika dia mitazona tantaram-panovana, ka ny fiverenana any amin'ny fanjakana teo aloha dia tena tsotra.
Ity fitaovana miasa an-tsary mahery an'ny Linux ity dia misy modely 61 mamela anao hanao asa isan-karazany, izay ahafahanay manasongadina:
fanontana tsy manimba mandritra ny workflow iray manontolo dia tsy miova mihitsy ireo sary tany am-boalohany.
Misaotra ny fanohanan'ny OpenCL tsara azontsika atao ny fanodinana sary nohafainganin'i GPU.
Fitaovana tena tsara amin'ny sivana sy fanasokajiana sary.
Fanohanana ireo endrika sary marobe toa JPEG , CR2 , NEF , HDR , PFM , RAF ankoatra ny hafa.
Fananana hitantanana ny feon'ny sary (ambaratonga, tsipika, famirapiratana ary fanendrena feo).
Ny fitantanana loko (saturation, fanovana loko mifantina ary ny fitantanana ny mombamomba ny loko).
Functionalities ho an'ny fanitsiana sary (manjavozavo, maranitra, mifangaro ary manaisotra tasy).
Vokatry ny zavakanto (famokarana rano, fanodinana fisarahana ary hakitrika tsikelikely).
Ahoana ny fametrahana Darktable?
Darktable dia cross-platform (Linux, Mac ary Windows), manana fonosana ihany koa izy ho an'ireo distros manan-danja indrindra, atoro anao rehefa mametraka Darktable dia mankany amin'ny anao pejy fametrahana ary apetraho ireo fonosana sahaza ho an'ny distro anay ary araho ny dingana efa nomanin'ny ekipa Darktable.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Takelaka maizina: Fitaovana miasa amin'ny sary
Persy dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara….
Mamaly an'i Persy